China Supplier N'ogbe ala Blind Fabric
MagicalTex Ime ụlọ Window Blinds Blackout Fabric For Office dị na mma. Ọ na-adịgide adịgide, enweghị ebu na nla. Anakwere na gburugburu ebe obibi enyi na enyi akwa, na-abụghị egbu egbu na keenweghiuto nke na-eme ka a ala gburugburu gị. Okwesiri maka Window French. Anyị nwere ọtụtụ ụdị nke oge gboo agba maka nhọrọ gị. Ihe ọ bụla nwere ọdịdị dị mma, ọ mara mma, na-emesapụ aka na okomoko. Anyị akwa bụ waterproof na ọkụ mgbochi.
MagicalTex High Quality Gunny Blind Fabric Blackout na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa anyị. Anyị nwere asọmpi asọmpi. Na elu mgbaru ọsọ na elu arụmọrụ, anyị na-enye ngwa ngwa nnyefe gị. Ma ọ dịịrị gị mfe ịwụnye ya. Nwere ike ịnwe usoro echichi dị iche iche, dịka ntinye nwunye, ntinye mpụga, ntinye nwụnye na ihe ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịnye gị nnwale n'efu ka ịlele ogo na agba.
China Supplier ala Blinds Fabric Blackout
MagicalTex Blackout Roller Blind Fabric bụ otu n'ime ngwaahịa ndị kachasị ewu ewu n'etiti ndị ahịa anyị. Ọ na-egbochi mmiri na mgbochi ọkụ. Ihe polyester dị mma nwere ike ime ka ọ dịgide, enweghị ebu, enweghị nla, enweghị nrụrụ, enweghị egwu mgbe eji ogologo oge. Ihe ọ bụla nwere ọdịdị dị mma, ọ mara mma, na-emesapụ aka na okomoko. Nwere ike ịnwe usoro echichi dị iche iche, dịka ntinye nwunye, ntinye mpụga, ntinye nwụnye na ihe ndị ọzọ. Ọ dịịrị gị mfe ịwụnye ya.
Anyị na-akpa bụ mmanụ-àmà na waterproof, ọ dị mfe ọcha, akọrọ ozugbo ụlọ akwụkwọ ji agwụ. Ma o nwere ezigbo ikike inyogwe ma nwee ezigbo mmetuta ikuku. High polyester fabric na-eme ka anyị akwa 'ike bụ 4 ugboro elu karịa naịlọn na ugboro 20 elu karịa viscose; Ezi agbanwe na-eme ka ngwaahịa anyị sie ike, na-adịgide adịgide, na-eguzogide ọgwụ. Na, akwa polyester anyị nwere nnukwu mgbochi okpomọkụ na mkpuchi mkpuchi. Anyị nwere ike ịnye gị nnwale n'efu!
MagicalTex Roller Blind Fabric bụ nke polyester, anyị nwere ụdị akwa dị iche iche maka nhọrọ gị. Ngwaahịa anyị dabara maka ahịa dị iche iche. Ngwaahịa anyị niile dị mma ma nwee ike inyere gị aka imeri obi ndị ahịa gị. Anyị na-akpa bụ mmanụ-àmà na waterproof, ọ dị mfe ọcha, akọrọ ozugbo ụlọ akwụkwọ ji agwụ. Ma o nwere ezigbo ikike inyogwe ma nwee ezigbo mmetuta ikuku.
Anyị nwere ọkachamara R & D center iji chepụta ngwaahịa ọhụrụ. Ngwaahịa anyị zuru ezu ị nwere ike ịchọta ezigbo ngwaahịa gị na katalọgụ anyị. nwere ọtụtụ ụdị, ụdị akwụkwọ ọhụụ, usoro ejiji, ụdị dị iche iche. Anyị bụ ndị nrụpụta, anyị na-ere ngwaahịa na ndị ahịa anyị ozugbo, ọ nwere ike inyere gị aka ịhapụ mmefu ndị ọzọ. Anyị kwenyere na anyị nwere ike ịbụ ezigbo ndị na-ebubata gị. Anyị nwere ike ịnye gị nnwale n'efu!
MagicalTex Roller Shutter Blackout Fabric bụ nke polyester nwere oke asọmpi. Ọ mara mma na ejiji. Na abụọ ihu itinye mkpuchi usoro, anyị na ngwaahịa ndị ọkara agbanyụcha ọkụ. Na elu ultrasonic ọnwụ technology, na-eme ya ọ bụla burr na nsọtụ, dị nnọọ mma. Ngwaahịa anyị niile dị mma na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya.
Ndị kpuru ìsì anyị na-eme mkpọtụ, ọ nwere ike ime ka ụlọ na ụlọ ọrụ gị dị jụụ, na-enye gị ebe dị jụụ ka mma. Anyị nwere obere MOQ, anyị nwere ngwaahịa maka ọtụtụ ngwaahịa anyị, anyị nwere ike ịhazi mbupu gị n'oge na-adịghị anya. Iji gosipụta obi anyị maka gị, anyị nwere ike ịnye gị nnwale n'efu maka ịlele ogo na agba.
Sunshade Blinds Linen akwa Blackout Polyester
MagicalTex Blackout Fabric bụ nke polyester, yana otu ngwaahịa anyị. Anyị nwere ike ịnye 200/230/250/300 obosara dị iche iche ka ịhọrọ. The arọ nke anyị ákwà bụ 310gsm kwa mita, na anyị nwere ike ime ahaziri obosara. Na elu ultrasonic ọnwụ technology, na-eme ya ọ bụla burr na nsọtụ, dị nnọọ mma. Anyị nwere agba dị iche iche maka nhọrọ gị, ị nwere ike ịhọrọ nke ọ bụla. Ọ dị mma maka ụlọ akwụkwọ, ụlọ na ọfịs.
Ngwaahịa anyị dị mma na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Ha na-adịgide adịgide, ndụ ha nwere ike ịbụ afọ iri. Anyị nwere obere MOQ maka gị. Ya mere, n'agbanyeghị na ọnụọgụ gị dị ukwuu ma ọ bụ obere, anyị nwere ike ịzụ ahịa gị na ezigbo mma na ọrụ kachasị mma, anyị na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa anyị. Anyị na-enye ọrụ 24 awa maka ndị ahịa anyị iji kwado gị. Na anyị mbụ imekọ ihe ọnụ, anyị nwere ike na-enye free samples gị.
MagicalTex Window Curtain Fabric 100% Polyester bụ nke polyester. Amfụfụ na-acha ụfụfụ na-eme ka ọ bụghị naanị ọkara agba ojii, kamakwa ọ nwere ọmarịcha anya. Anyị nwere agba dị iche iche na obosara dị iche iche maka nhọrọ gị. Anyị nwere ike ịme azụmaahịa OEM. Anyị na-akpa bụ mmanụ-àmà na waterproof, ọ dị mfe ọcha, akọrọ ozugbo ụlọ akwụkwọ ji agwụ. Ma o nwere ezigbo ikike inyogwe ma nwee ezigbo mmetuta ikuku.
Ngwaahịa anyị na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa anyị. Anyị na-enye afọ 10 akwụkwọ ikike niile anyị na akwa. Anyị nwere obere MOQ, ọ bụrụ na iwu gị buru ibu, anyị ga-eme ndokwa maka gị, ma ọ bụrụ na iwu gị pere mpe, echegbula onwe anyị, anyị nwere ngwaahịa maka ngwaahịa ere ọkụ. Anyị nwere ike ịnye gị nnwale n'efu ka ịlele ogo na agba.
MagicalTex Blackout Roller Blinds Fabric bụ nke polyester. Ọ mara mma na ejiji. Na abụọ ihu itinye mkpuchi usoro, anyị na ngwaahịa ndị ọkara agbanyụcha ọkụ. Na elu ultrasonic ọnwụ technology, na-eme ya ọ bụla burr na nsọtụ, dị nnọọ mma. Ngwaahịa anyị niile dị mma na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Anyị na-akpa bụ mmanụ-àmà na waterproof, ọ dị mfe ọcha, akọrọ ozugbo ụlọ akwụkwọ ji agwụ.